ပါဝါ:15kw + 0.4kw သုံးအဆင့်
စွမ်းရည်:100~ 150kg / h
ခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးလေးများစက်, ထို့အပြင်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုခေါ်, အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်ငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေသတ္တဝါများအစာတောင့်များအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်းစသည်. နောက်ဆုံးအစာတောင့်သည်ထူးခြားသောပုံစံနှင့်အရသာကောင်းမွန်သည်, မြင့်မားသောအာဟာရနှင့်ချောမွေ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ. ငါးနှင့်ပုစွန်ကိုကျွေးမွေးသည်, အတောင့်ကို extruding သည့်အခါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေပေါ်အချိန်ကို extrusion ဒီဂရီညှိခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်. လောလောဆယ်, ရေပေါ်ငါးတောင့်စက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်စံပြဖြစ်လာသည် (ငါးခူ, တီလားပီးယား, ပုစွန်စသည်တို့) ကိုင်ဆောင်သူသို့မဟုတ် ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ.
Floating Fish Pellet Mill ၏လုပ်ငန်းအခြေခံ
ရေပေါ်ငါးတောင့်စက်ပြင်ပတွင်အပူပေးရန်မလိုအပ်ပါ, ကုန်ကြမ်း၏ဝက်အူ extruding မှတဆင့်, အပူကိုလေလုံသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းသည်, နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှည်စဉ်အတွင်း, ကုန်ကြမ်း၏ကစီဓါတ်နှင့်ဖိုင်ဘာရောင်ဖြစ်လာသည်. ထိုအခါဖိအား - တင်းကျပ်စွာအခြေအနေအောက်မှာ, ပစ္စည်းမှိုပုံဖော်ခြင်းဖြင့်လုံးလေးများသို့ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်. အဆုံးမှာ, အဆိုပါဝက်အူ၏ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မြင့်မားသောဖိအားမှတဆင့်, ပုံမှန်နှင့်မြန်ဆန်စွာလှည့်သော forepart ရှုးဖြင့်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်, အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များသည်ကျုံ့သွားပြီးအခန်းအပူချိန်နှင့်ဖိအားတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သေးငယ်သည့်ဘောလုံးများဖြစ်လာလိမ့်မည်.
Floating Fish Pellet Mill ၏ကောင်းကျိုးများ
●သိုလှောင်ခြင်း: ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောနေရာ၌သိမ်းဆည်းထားပါက ၂ လမှ ၃ လအထိထားနိုင်သည်.
●တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး: တိုးချဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အများဆုံးဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်. အနိမ့်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု (အကြောင်း 10%) ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်.
●အာဟာရ: တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်စက်ရုံပရိုတိန်းနှင့်အတူထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, ငါးဆီသို့မဟုတ်အခြားအဆီ, တိကျသောငါးမျိုးစိတ်များလိုအပ်ဗီတာမင်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်သတ္တုဓာတ်. ၎င်းသည်အလွန်အာဟာရရှိသောကြောင့်ငါးများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်.
●ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ: သင့်လျော်သောအရွယ်အစားနှင့်သိပ်သည်းဆရှိသောတောင့်တောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကိုကျဆင်းစေပြီးအစာအကြွင်းအကျန်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်.
1. အလွန်လျင်မြန်စွာ (သို့) အလွန်အကျွံမကျွေးပါနှင့်. ဤသည်ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုညစ်ညမ်းစေသည်.
2. ငါးများသည်အစာကျွေးခြင်းနှင့်အစာကျွေးခြင်းအားသင့်တော်စွာတုန့်ပြန်ပုံကိုလေ့လာပါ. စားသုံးမှုနိမ့်ကျခြင်းသည်ရောဂါလက္ခဏာသို့မဟုတ်ရေဆိုးအရည်အသွေးနိမ့်ကျနိုင်သည်.
4. ခြောက်သွေ့သောတောင့်အစာကျွေးခြင်းကိုသုံးပါ, လူအင်အားကိုချွေတာရန်အလိုလျောက်နို့တိုက်ကျွေးရေးစက်တပ်ဆင်ထားရန်စဉ်းစားပါ.
5. လယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုမှတ်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ငါးမွေးမြူသူများအားကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်မှန်ကန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီသည်. ၎င်းသည်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်.